Homeसमाचारमहिनाको तीन लाख कमाउन छोडेर नेपालमा बाख्रा पाल्दै महेन्द्र, करोडको लगानिमा कति कमाउछन् ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
April 11, 2021 admin समाचार 5827
भिडियो तल दिइएको छ:
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रमा भविष्य नदेखेर नेताहरु एमाले तिर लागेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश २ का चार सांसदले माओवादी केन्द्र छाडी एमाले प्रवेश गरेको विषयलाई लिएर मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो टिप्पणी गरे’का हुन् । उनले भनेका छन्,’प्रदेश २ मा ४ जना प्रदेश सभासद्ले माओवादी किन छोडे ? सुपमा मन्त्रीले राजी’नामा दिएर एमाले किन रोजेरु यहाँ अव&सर होइन भविष्य प्रमुख बन्यो’।
हिजो शनिबार २४ घण्टा’को समय दिई जवाफ र पार्टीभित्र नफर्किए पार्टीबाट निस्कासन गरिने माओवा’दीको तयारी रहन्दा यता नेताहरु भने एमाले तिर लर्को लागेर जाने क्रम रोकिएको छैन । त्यस्तै , माओ’वादीको तर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री बनेका झपट बोहरा पनि एमालेतिर लागेका छन् । माओ’वादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ४ जना प्रदे:शसभा सदस्यलाई पार्टीले श’निबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ओएस नेपालबाट
दैव पनि कति नि’ष्ठुरी ? श्रीमती अस्पतालमा श्रीमानको अबस्था यस्तो (भिडियो)
९ महिना पछि खुलेको चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन फारम फेरि बन्द
January 4, 2021 admin समाचार 7596
नौ महिना पछि खुलेको स’वारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अनलाइन फा’राम फेरि ब’न्द भएको छ । अनलाइन सेवामा अत्य’धिक चाप भएपछि सर्भरमा सम’स्या देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । आज सोमबार विभागले एक सुचना जारी
पत्रकार शान्तिराम कार्कीको दु:खद नि’धन
May 16, 2021 admin समाचार 5772
एक जना पत्रकारको नि’धन भएको छ । जनता टाइम्स डट कमका सम्पादक शान्तिराम कार्कीको निध’न भएको हो । च्यानल नेपाल टेलिभिजनदेखि पत्र’कारीता सुरु गरेका उनले दशक बढी मिडियामा विताएका छन् । उनको नि’धनमा सहकर्मीहरुले दुख
January 5, 2021 admin समाचार 9034
इन्सपेक्टर पिताले डीए’सपी छोरीलाई सल्युट गरेको एक तस्विर सामाजिक सं’जालमा भाइरल बनेको छ । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा एक इन्स्पेक्टर प्रहरीले डीएसपी प्रहरीलाई सल्यु’ट गरेका हुन् । आन्द्र प्रदेशका इन्स्पे’क्टर श्याम सुन्दरले छोरी डीएसपी जेसी प्रसा’न्तीलाई